ရူပါရုံနှင့်စိတ်အာရုံချောက်ခြားခြင်း - သူတို့ကဘာအဓိပ္ပာယ်ရှိပါသလော
ကျနော်တို့သာ "အရူး" လူစိတ်အာရုံချောက်ခြားခြင်းရှိသည်ထင်စေခြင်းငှါ, ဒါပေမယ့်စစ်မှန်တဲ့မဟုတ်ပါဘူး။ အိုလီဗာအိတ်, ဆေးပညာ၏နယူးယောက်တက္ကသိုလ်ကျောင်းမှာအာရုံကြောပါမောက္ခ, စိတ်အာရုံချောက်ခြားခြင်းသေချာပေါက်ကြှနျုပျတို့နှငျ့အတူအမှားတစ်ခုခုတစ်လက္ခဏာဘုံဖြစ်ကြပြီးမပေးကြောင်း New York Times ကိုအတွက်ရေးသားခဲ့သည်။
စိတ်အာရုံချောက်ခြားခြင်းတစ်နှိုးဆွခြင်းမရှိဘဲတစ်ဦးအာရုံခံအမြင်ဖြစ်ကြသည်။ တနည်းအားဖြင့်သင့်ဦးနှောက်ကိုမြင်ခြင်း, ကြားသို့မဟုတ်အနံ့ဖို့ "ထွက်ရှိပါတယ်" တစ်ခုခုခြင်းဖြင့်နှိုးဆွခံခြင်းမရှိဘဲတစ်ဦးမျက်မှောက်သို့မဟုတ်အသံသည်သို့မဟုတ်အနံ့ကိုဖြစ်ပါတယ်။
အမှန်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့အာရုံခံအတွေ့အကြုံများအပေါငျးတို့သညျကြှနျုပျတို့၏ဦးနှောက်နှင့်အာရုံကြောစနစ်များကိုဖန်တီးလျက်ရှိသည်ဖြစ်ပါသည်။ အမှုအရာအရောင်နှင့်အတိမ်အနက်ကိုအပါအဝင်ကျွန်တော်တို့ကိုပေါ်လာအဆိုပါလမ်း, လမ်းကိုအကြှနျုပျတို့အား "အသံက" အသံကျွန်တော်တို့ရဲ့အလောင်းတ္ထုများနှင့်အသံလှိုင်းတုံ့ပြန်ဖန်တီးကြောင့်သက်ရောက်မှုရှိပါတယ်။ အခြားမျိုးစိတ်တစ်ခုဖြစ်လျက်ရှိအလွန်ကွဲပြားခြားနားတဲ့အာရုံကြောဝါယာကြိုးများနှင့်အာရုံခံစွမ်းရည်နှင့်တသားတ, ဘေးမှာကျွန်တော်တို့ကိုဖြစ်ပေမယ့်တစ်ဦးလုံးဝကွဲပြားခြားနားသောကမ္ဘာကြီးသိပေလိမ့်မည်။
သူက "အမှုအရာကိုမြင်လျှင်" သူအနေနဲ့သက်ကြီးရွယ်အိုအမျိုးသမီးရှင်းပြ "ဟုအဆိုပါဦးနှောက်၏အမြင်အာရုံအစိတ်အပိုင်းများကိုအမှန်တကယ် input ကိုဆုံးရှုံးနေကြလျှင်, သူတို့သည်ဆွဘို့အဆာလောင်မွတ်သိပ်ဖြစ်ကြပြီးသူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်များ၏ရုပ်ပုံများကိုဖွဲ့အစီအမံလိမ့်မည်။ "
ဒါဟာတစ်နည်းကိုယ်တွင်းကလီစာတွေကို "ဆာလောင်မွတ်သိပ်" ဖြစ်နိုင်သောစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းသည်မဟုတ်လော ယင်းအပေါ်သူ၏သွန်သင်ချက်များတွင် ငါး Skandhas , ဗုဒ္ဓကျွန်တော်တို့ရဲ့အာရုံ, သဘောထားအမြင်များနှင့်ဝိညာဏ်အားလုံးကျွန်တော်တို့ရဲ့အလောင်းတွေတှငျနထေိုငျနှင့်ပြပွဲကိုသြဒိနိတ်တဲ့ "ကိုယ့်ကိုယ်ကို" ၏အချည်းနှီးဖြစ်ကြောင်းကိုသင်ပေးခဲ့တယ်။
နှင့်မျှမတို့, ဝိညာဏ် "အုပ်" ကျွန်တော်တို့ရဲ့နှာခေါင်းထက်မဆိုပိုပြီးတော့မဟုတ်ပါဘူး။ တစ်ဦးကိုယ့်ကိုယ်ကို၏အတွေ့အကြုံကျွန်တော်တို့ရဲ့အလောင်းတွေအခိုက်အနေဖြင့်ယခုအချိန်တွင်မှ re-ဖန်တီးတစ်ခုခုပါပဲ။
ဒါပေမယ့်နောက်ကျောစိတ်အာရုံချောက်ခြားခြင်းဖြစ်သည်။ ကြှနျုပျတို့သညျ ", ရူပါရုံ" အဖြစ်အလေးအနက်ထားစိတ်အာရုံချောက်ခြားခြင်းယူသင့်တယ်ဒါမှမဟုတ်ကျနော်တို့ကသူတို့ကိုလျစ်လျူရှုသင့်တယ်ဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုကားအဘယ်သူနည်း ထေရဝါဒ နှင့် ဇင် ဆရာများများသောအားဖြင့်သူတို့ကိုအရေးပါမှုကိုပူးတွဲမသင်ပြောပြလိမ့်မယ်။ ဒါကြောင့်သင့်ရဲ့အာရုံခံသင်တစ်ခုခုပြောပြရန်ကြိုးစားနေသည်ဟုဖြစ်နိုင်သည်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒါကသူတို့ကိုလျစ်လျူရှုအဖြစ်အတိအကျတူညီမဟုတ်ပါဘူး။ သို့သော် "တစ်ခုခု" တော်တော်သာမန်ဖြစ်နိုင်ပါသည် - သင်အိပ်ချင်လာပြီနေတာ, ဒါမှမဟုတ်သင့်ရဲ့ကိုယ်ဟန်အနေအထားထိန်းညှိဖို့လိုအပ်ပါတယ်။
မိမိဆရာရှာနဲ့ Master '' ဟုပြောသည်သူတစ်ဦးအသစ်အားသံဃာတော်များနှင့် ပတ်သက်. တစ်ဦးကိုမကြာခဏ-ပြောသည်ဇင်ပုံပြင်ရှိတယ်! ကိုယ့်ယခုတှေးတောဆငျခွများနှင့်ဗုဒ္ဓကိုမြင်လျှင်ခဲ့သည်! "
"ကောင်းပြီ, သူ့ကိုသင်နှောင့်ရှက်ကြကုန်အံ့ကြဘူး" ဟုအဆိုပါမာစတာပြန်လည်ဖြေကြားခဲ့သည်။ "ကိုယ့်တရားအားထုတ်ခြင်းစောင့်ရှောက်လျှင်, သူသွားပါလိမ့်မယ်။ "
ဗုဒ္ဓသို့မဟုတ်မင်္ဂလာဗာဂျင်း, ဒါမှမဟုတ်တစ်ဦးဒိန်ခဲသားညှပ်ပေါင်မုအပေါ်ယေရှု၏မျက်နှာ - က "သင်ခန်းစာ" ကိုမကြာခဏအချို့ TRANSCEND ဆန်းကြယ်မှုများအတွေ့အကြုံရှိသည်ဖို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆန္ဒမှာငါတို့ဦးနှောက်ကျနော်တို့အဘို့အတောင့်တွေဘာတွေရှိတယ်ဆိုတာတက် conjure သောကွောငျ့ဖွစျသညျ။ ဒါတွေကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆုပ်ကိုင်သဘာဝတရား၏စီမံချက်များနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ဘေးဥပဒ်ဖြစ်ကြသည်။
ဆရာပိုမိုနက်ရှိုင်းကြောင်းကျွန်တော်တို့ကိုပြောပြ dhyanas နှင့် သစ္စာဉာဏ်အလင်း သူ့ဟာသူအာရုံခံအတွေ့အကြုံမဆိုကြင်နာနှိုင်းယှဉ်မရပါ။
မည်သည့်ကျောင်းသားကိုဖော်ပြရန်ဖို့ကြိုးစားလျှင်သည်ဟုဆိုရန်အသုံးပြုတစ်ဦးကဇင်ဆရာ သမာဓိ ကသမာဓိမဟုတ်ခဲ့ - "ငါ ... ကိုမြင်လျှင်" သို့မဟုတ် "ငါခံစားရတယ် ... " ဟုအားဖွငျ့ဖွစျသညျ။
အခြားတစ်ဖက်တွင်, ကတစ်ချိန်ကကြီးမြတ်၌အကြှနျုပျတို့၏အာရုံခံကိုပိုမိုနက်ရှိုင်းဉာဏျပညာ, သာမန်ဝိညာဏ်လက်လှမ်းမမီထဲကတစ်ခုခုကနေလာမယ့်သောအချက်ပြမှုပေးပို့နေချိန်မှာပဲရှိနေနိုင်ပါသည်။ ဒါဟာအချို့ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရေးပါမှုရှိတယ်လို့ရုံခံစားမှု, ဒါမှမဟုတ်တစ်ဦးလျင်မြန်စွာ glimpsed "ရူပါရုံကို" အလွန်သိမ်မွေ့ဖြစ်နိုင်သည်။ ဒီအစဉ်အဆက်ဖြစ်ပျက်ခဲ့လျှင်ရုံကလက်ခံဂုဏ်ပြုတဲ့အတှေ့အကွုံဆက်သွယ်သမျှ, ပြီးတော့သူကသွားကြကုန်အံ့။ ဒါကြောင့်ထဲကတစ်ဦးနဲ့ Big Deal လုပ်သို့မဟုတ်မည်သည့်လမ်းထဲမှာ "ချက်တွေ" ဒါမှမဟုတ်ဆုကြေးဇူးကိုတစ်ဦးအတားအဆီးသို့လှည့်ပါလိမ့်မယ်မထားပါနဲ့။
အချို့သောဗုဒ္ဓဘာသာထုံးတမ်းစဉ်လာမှာတော့အဘိဥာဏ်သို့မဟုတ်အခြားသဘာဝလွန်အင်အားကြီးဖွံ့ဖြိုးသောသူဉာဏ်အလင်းသခင်အကြောင်းကိုပုံပြင်များရှိပါတယ်။ သငျသညျအများစုမှာဒဏ္ဍာရီသို့မဟုတ်ရူပကတှေကဲ့သို့သောအဖြစ်အပျက်များကိုနားလည်သဘောပေါက်ရန်နာမယူဘဲနေစေခြင်းငှါ, သင်မူကားအချို့သဘောမတူပါလိမ့်မယ်။
ထိုကဲ့သို့သောအဖြစ်အစောပိုင်းစာသားများ, ပါဠိ Tipitika , ကျွန်တော်တို့ကိုသဘာဝလွန်အင်အားကြီးဖွံ့ဖြိုးဆဲ၏မျက်နှာကို ထောက်. ကျင့်သုံးခြင်းနှင့်မကောင်းတဲ့အဆုံးမှကြွလာသောသူ Devadatta တူသောသံဃာပုံပြင်များပေးပါ။ ဒါကြောင့်တချို့ဉာဏ်အလင်းဆရာများထိုကဲ့သို့သောအင်အားကြီးတဲ့ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးမမှတ်ရှိပါတယ် "အင်အားကြီး" ဖွံ့ဖြိုးပြုပါလျှင်ပင်။
စိတ်အာရုံချောက်ခြားခြင်း Do ပေမဲ့တစ်ခုခုမှားသည့်အခါ
ကျွန်တော်တစ်ဦးသာမန်အတွေ့အကြုံကိုအဖြစ်စိတ်အာရုံချောက်ခြားခြင်းအကြောင်းပြောနေတာခဲ့တာသော်လည်း, သူတို့သည်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအာရုံကိုလိုအပျကွောငျးကိုမှန်ကန်အာရုံကြောဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များ၏လက္ခဏာသက်သေဖြစ်နိုင်သည်ကိုမမေ့မလြော့ပါ။ အာရုံခံစိတ်အာရုံချောက်ခြားခြင်းမကြာခဏခေါင်းတစ်ခြမ်းကိုက်ခေါင်းကိုက်ခြင်းနှင့်သိမ်းယူမှုနှင့်အတူလိုက်ပါ။ ကရင်အမ်းစထရောင်း, ဘာသာရေးတစ်ခုပညာရှင်နှစ်ပေါင်းမကြာခဏဆာလဖာရဲ့အနံ့ဖြင့်လိုက်ပါသွား, အမြင်အာရုံပျက်ယွင်း၏အဆင့်ခံစားခဲ့ရသညျ။ နောက်ဆုံးတော့သူမယာယီဝက်ရူးပြန်ရောဂါနှင့်အတူသိလိုက်ရတယ်။
အခြားတစ်ဖက်တွင်, ရှည်လျားဘာဝနာဆုတ်ခွာအပေါ်စိတ်အာရုံချောက်ခြားခြင်းတော်တော်သာမန်နိုင်ပါတယ်။ အချိန်အများစုမှာဒီမကြာခဏပင်ပန်းနွမ်းနယ်ခြင်းဖြင့်လိုက်ပါသွားတဲ့ "အာရုံခံဆင်းရဲချို့တဲ့" အကျိုးသက်ရောက်မှုဖြစ်ပါသည်။ တစ်ဦးကြမ်းပြင်သို့မဟုတ်မြို့ရိုးပေါ်မှာသင်၏မျက်စိအနားယူနေဆဲထိုင်နာရီ, နှင့်သင့်ဆာလောင်မွတ်သိပ်မျက်စိသူတို့ကိုယ်သူတို့ဖျော်ဖြေဖို့လိုပေမည်။
အာရုံရသောအခါအစောပိုင်းဇင်ကျောင်းသားအဖြစ်ကဘာဝနာခေါင်းအုံးအထက်တွင် floating ၏အာရုံခံစားမှုအောင်မြင်ရန်, သိသိသာသာလွယ်ကူသောဖြစ်ခဲ့သည်။ ဒါကသင့်ဦးနှောက်ကယ့်ကိုမျောမခံခဲ့ရပေမယ့် "floating ဟန်ဆောင်" သိတယ်လျှင်ပင်စစ်မှန်သောဖြစ်ခဲ့သည်။ ပြောစရာမလိုတော့ပါဘူး, ဒီတစ်ဦးအကြံပြုဇင်အလေ့အကျင့်သည်မဟုတ်, ကတစ်ခါတစ်ရံတွင်ပင်အားကြီးသောစိတ်အာရုံချောက်ခြားခြင်းလုံးဝမရှိ, ဝိညာဏအဓိပ်ပာယျရှိသည်ကိုပြသတတ်၏။
ဒါဟာအစတခါတရံသင့်ရဲ့အာရုံစူးစိုက်မှုအားကောင်းလာပြီသောအခါသောအမှုဖြစ်စေခြင်းငှါ, မျက်မှောက်နှင့်အခြားအာရုံကိုသင့်ဦးနှောက်၏အစိတ်အပိုင်း "တိတ်တိတ်ဆိတ်ဆိတ်" ဖြစ်လာသည်။
သငျသညျကြမ်းပြင်ပြောင်းရွှေ့သို့မဟုတ်ထိုအုတ်ရိုးအရည်ပျော် "ကိုကြည့်ပါ" ပေလိမ့်မည်။ ထိုသို့ဖွစျလြှငျ, "ရှိုး" ဟုအဆိုပါပျော်မွေ့သောအချက်မှာရပ်တန့်ပေမယ့်အာရုံမထားကြဘူး။
အဆိုပါကိုယ်ကျင့်တရား "ရူပါရုံ" မျိုး, ဖြစ်ပျက်ကြဘူး, ဒါပေမယ့်သူတို့ကဝိညာဉ်ရေးရာလမ်းကြောင်းတလျှောက်ရှုခင်းမဟုတ်ဘဲလမ်းကြောင်းကိုသူ့ဟာသူတူတစ်ခုခုပါပဲဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့ကိုအရမ်းလေးစားမိပါတယ်မှရပ်တန့်မနေပါနဲ့။ နှင့်အညီ, ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်, တစ်လမ်းအတွက် ကအားလုံးကိုတစ်ယောင်မှားခြင်းရဲ့ ။
ဗုဒ္ဓဘာသာ Term ၏အဓိပ္ပာယ်: Tripitaka
ယဉ်တန်: က "ခန်းမရလဒ်ပြသမှု၏" Accupressure ပွိုင့်
'' Tener '' စိတ်ခံစားချက်တွေကိုဖော်ပြဖို့အသုံးပြု, ဖြစ်ခြင်း၏စတိတ်
အဘယ်အရာကိုတစ်တိရိစ္ဆာန် Endothermic ကို?
2016 Ducati 959 Panigale ကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း: Ducati ရဲ့နယူးစူပါအလယ်အလတ်၏ပထမဦးဆုံးစီးနင်
ဂရိ Underworld ရဲ့ငါးမြစ်ချောင်းများဘာတွေလဲ?
ဆိုဒီယမ်ဘိုင်၏ပြိုကွဲ (မုန့်ဖုတ် Soda) အတွက်ညီမျှခြင်း
လောက Vs လောက: အ Difference ကဘာလဲ?
အဆိုပါ Jedi ၏အခြေခံသွန်သင်
Jigoro Kano ၏အတ္ထုပ္ပတ္တိနှင့်ကိုယ်ရေးဖိုင်
အခြေခံပညာစစ်ဆင်ရေးများအတွက် input Output စားပွဲတင်သင်ထောက်ကူ